Windows 10 vs Windows 11: kala duwanaanshaha ugu weyn | Madasha Mobile -ka
Windows 10 vs Windows 11: kala duwanaanshaha ugu weyn
Daniel Terrasa | | Nidaamyada hawlgalka, Windows
Nooca cusub ee nidaamka hawlgalka Microsoft waa halkaan waana lama huraan in adeegsadayaashu isweydiiyaan su'aasha: Windows 10 iyo Windows 11. Maxay ku kala duwan yihiin? Runtii nooca cusub ma ka fiican yahay mise waxaa jira dhinacyo taban oo ay tahay inaan ogaano?
Bilowgii, waa in la sheegaa in Windows 11 ay la timaaddo is -dhexgal cusub oo adeegsade, qaybinta dalabka oo la hagaajiyay iyo waxyaabo dheeraad ah oo diiradda lagu saaray arrinta amniga. Intaa waxaa sii dheer, noocaan ugu dambeeyay ee nidaamka qalliinka wuxuu ku siinayaa horumarin badan arjiga iyo dhowr astaamood oo aad u xiiso badan ciyaartooyda.
Windows 11 ayaa si rasmi ah loo sii daayay maalmo uun ka hor, Oktoobar 5, 2021. Waxay u timid sidii casriyeyn bilaash ah iyada oo loo marayo Cusbooneysiin Windows Windows 10 kombiyuutarrada la kulma qeexitaanno farsamo oo la taageeray qaarkood.
Waa wax la yaab leh in la arko sida Microsoft ay u jabisay eraygeeda, tan iyo markii ay bilawday Windows 10 waxay si adag u shaacisay inay noqonayso nooca ugu dambeeya ee Windows. Waxaan hore u aragnay inaysan sidaas ahayn.
1 Dhignaashada iyo shuruudaha
2 Windows 10 vs Windows 11: isku ekaanshaha
3 Windosws 10 vs Windows 11: kala duwanaanshaha
3.1 Naqshad cusub
3.2 Guddi widget
3.3 Hagaajinta aagga hawsha badan leh
3.4 Shaqada shaashadda taabashada oo la xoojiyay
3.5 Dhexgalka app Android
Dhignaashada iyo shuruudaha
Shuruudaha waafaqsanaanta Windows 11
Laakiin intaadan ka fikirin samee boodboodka Windows 10 ilaa Windows 11, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan hubinnaa in qalabkayagu ku habboon yahay nooca cusub. Microsoft waxay u qaabaysay qalab gaar ah hawshan: Hubinta Caafimaadka Windows PC. Si aad u isticmaasho, waa inaad marka hore iska diiwaangelisaa xubin ahaan Windows Insider.
Runtu waa taas shuruudaha rakibidda Windows 11 kombiyuutarkayaga si aad ah ayay u dalbanayaan. Waxay kala yihiin:
CPU: 1 GHz ama ka badan, 2 cores ama ka badan, iyo processor 64-bit ah oo ku habboon.
Kaydinta: 64 GB ama ka sareeya
RAM: ugu yaraan 4GB.
Shaashadda: 720 inch 9p screen.
Firmware: UEFI, Awoodda Kabaha Sugan.
TPM: Module Platform -ka la aamminay 2.0
Kaarka garaafyada: DirectX 12 oo ku habboon darawalka WDDM 2.0
Si guud marka loo hadlayo, waxay yihiin shuruudo la mid ah kan Windows 1st, marka laga reebo qashinka TPM. Isticmaalayaasha qaar ayaa laga yaabaa inay dhibaato ka haysato socodsiinta cusboonaysiinta qalabkan awgiis.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, Microsoft ayaa si cad u sheegtay in rakibidda Windows 11 aan loo oggolaan doonin aaladaha aan buuxin shuruudaha qalabka loo baahan yahay. Dhammaan nabadgelyada ayay yidhaahdaan.
Windows 10 vs Windows 11: isku ekaanshaha
Is -dhexgalka Windows 11 ma soo bandhigo isbeddelo waaweyn marka loo eego kan Windows 10
Windows 11 uma joogo inuu xiddig ka noqdo horumar ama kacaan nidaam hawlgal. Taas beddelkeeda, waxaa la dhihi karaa waa sidaas sharad ah sii wadista: ku dhawaad ​​dhammaan codsiyada aan ku isticmaalno Windows 10 waxay awoodi doonaan inay sii wadaan isticmaalka Windows 11 dhibaato la'aan.
Qof kasta oo ku rakiba nuqulka cusub kumbuyuutarkooda (ka dib marka uu buuxiyo shuruudaha lagama -maarmaanka ah) wax dhib ah kuma yeelan doono inuu dhex maro is -dhexgalka cusub. Nidaamka daaqaddu waa isku mid, oo liisaska waa sahlan yihiin in la helo. Sida iska cad bilicsanaantu waa wax ka duwan, laakiin isbeddellada ma aha kuwo xagjir ah.
Sawirka kore, shaashadda ka socota Windows 11, ayaa si fiican u muujinaya tan. Sii wadista bilicda iyo dhismaha Wax kasta oo aan ka heli karno Windows 10 sidoo kale waxaa laga heli doonaa Windows 11.
Windosws 10 vs Windows 11: kala duwanaanshaha
Laakiin waxa ugu xiisaha badan ee ku saabsan Windows 11 waa walxaha cusub ee ay ka kooban tahay, kuwaas oo aan si faahfaahsan dib ugu eegi doonno:
Daaqadaha wareegsan iyo kuwa kale ee naqshadeynta Windows 11
Waxaan horey u sheegnay in is -dhexgalka ay fududahay in la aqoonsado, maadaama uusan ka leexanayn xuduudaha noocyadii hore. Si kastaba ha ahaatee, Microsoft ayaa cusboonaysiisay muuqaalka dhammaan daaqadaha, ka sii wareegsan oo qurux badan.
Dhab ahaan isku mid ayaa laga dhihi karaa menu macnaha guud iyo File Explorer. Kan dambe wuxuu hadda bixiyaa muuqaal aad uga nadiifsan sidii hore, oo leh amarrada ugu badan ee laga heli karo aaladda aaladda cusub. Natiijada tani waa taas Windows 11's File Explorer wuxuu hadda u muuqdaa mid aad u dhow. Ka sokow taas, waxay sidoo kale bixisaa tiro astaamo cusub oo la heli karo.
Isbedelo badan: bar -hawsha ayaa hadda udub -dhexaad u ah (Waxay umuuqataa wax u eg macOS), halka menu bilowga uu sidoo kale ka kooban yahay geeso wareegsan, oo bixiya xulashooyin muuqda oo yar. Si aad u hesho dhammaan codsiyada waa inaad tagtaa qayb gaar ah, oo si fiican uga qarsoon aragtida gadaasha badhanka "Dhammaan codsiyada". Dhanka kale, menu -ka bilowga cusub waa mid aad u yar, aad uga kooban Windows 10.
Guddida cusub ee Windows 11
Mid ka mid ah isbeddelada ugu muhiimsan ee Windows 11 soo bandhigay waa Ka bixitaanka Tiles Live. Laakiin wax dhib ah ma jiraan, maxaa yeelay beddelkeeda waxay ku dartay taxane ah widgets isku shaqo ayay qabtaan. Dabcan, kuma heli doonno liiska bilowga, maadaama ay leeyihiin guddi u gaar ah.
Sidan, iyada oo loo marayo guddi hoosaad Waxaan ku dari karnaa, dhaqaaqi karnaa ama joojin karnaa widget -yada gudaha Windows 11 sida ugu fudud.
Hagaajinta aagga hawsha badan leh
Naqshadeeyayaasha si ay ula shaqeeyaan codsiyo badan isla mar
ka Naqshado deg deg ah Windows 11 waxay qaadataa heer cusub habka loo shaqeeyo daaqadaha kala duwan ee ka furan shaashadda kombiyuutarradayada. Tilmaamahan, waxaad ka dooran kartaa 6 qaab -dhismeed oo la heli karo si aad si fiican ugu habayso codsiyadaada furan. Intaa waxaa dheer, Windows 11 wuxuu xifdin doonaa codsiyada furan si aad si fudud ugu laaban karto qaabkaas waqti kasta.
Si fudud dul -dhig ku dul -dhig arjiga arjiga hawsha hawsha waxaanan dooran karnaa naqshadda Snap -ka ee la xiriirta oo aan ku soo celinno dhammaan codsiyada aan la shaqaynaynay.
ka kombiyuutarrada kumbuyuutarka iyagana waa la hagaajiyay. Tusaale ahaan, hadda waxay noo oggolaadaan inaan habeynno asalka mid kasta oo iyaga ka mid ah. Iyo haddii aan la shaqeyno kormeerayaasha dibedda, Muuqaal kale oo aad u xiiso badan: Windows 11 ayaa hadda xusuusan doona daaqadaha oo si otomaatig ah u soo celin doona marka aan ku xirno kombiyuutarkeena kormeere dibadeed. Markaa waxaan sii wadi karnaa isla meeshii aan ka tagnay.
Shaqada shaashadda taabashada oo la xoojiyay
Windows 11 hagaajinta shaashadda taabashada
Windows 11 wuxuu si weyn diiradda u saarayaa shaqeynta faylka shaashadda taabashada. Isticmaalka habkan, menu -ka guriga wuu baaba'ayaa oo astaamaha waa la weyneeyay. Taasi waa, way u sahlan yihiin inay ciyaaraan.
Si aad u sahlanaato, qaar ayaa lagu daray dhaqdhaqaaqyo taabasho cusub taasi waxay noo oggolaanaysaa inaan si fudud ugu beddelno arjigii ugu dambeeyay ee la isticmaalay, aan ku noqonno miiska ama aan soo celinno daaqadaha furan ee arjiga. Waxaan sidoo kale ku furi karnaa Aragga Hawsha tilmaamo iyo is -beddel u dhexeeya daaqadaha dalabka iyo miisaska miisaska leh.
El kiiboodhka taabashada Waxay leedahay habayn wanaagsan, oo leh mowduucyo badan oo laga soo xusho. Soo gelinta khad ayaa sidoo kale la hagaajiyay. Hadda waxay ku jirtaa a "Liiska qalinka" ee ku jira bar -hawleedka noo oggolaanaya inaan si dhakhso leh u bilowno codsiyada. Intaa waxaa dheer, kuwan qalimaan Waxay leeyihiin jawaab celin haptic ah, markaa waxaan dareemi karnaa gariirka inta aan isticmaalayno. Taabasho dhab ah.
Ugu dambayntii, waxaa mudan in la muujiyo ka mid noqoshada a taageerada gelinta codka. Waxaad ku geli kartaa qoraal kasta si fudud adoo isticmaalaya makarafoonka.
Dhexgalka app Android
Isku -darka dalabka Android ee Windows 11
Windows 11 ayaa bixisa taageerada hooyo ee barnaamijyada Android Mahadsanidiin Tiknoolajiyadda Intel Bridge. Xitaa haddii ay tahay tikniyoolajiyadda Intel, adeegsadayaasha AMD waa inay sidoo kale awoodaan inay si habsami leh u maamulaan barnaamijyada Android.
Maadaama Microsoft ay iskaashi la samaysay Amazon u gudbinta codsiyada, illaa inta kombiyuutarkeenu iswaafaqsan yahay, waan awoodnaa soo dejiso oo ka wad barnaamijyada App -ka Amazon App Store. Tani waa muuqaal gebi ahaanba cusub. In Windows 10, adeegsadayaashu waa inay ku tiirsanaadaan emulators -ka Android si ay u socodsiiyaan codsiyada. Tan waxaa lagaga adkaan doonaa Windows 11, in kasta oo arrimaha is -waafajinta la arki doono.
Xbox Game Pass ee Windows 11
Ciyaartoyda Feejignaanta: Windows 11 wuxuu ku darayaa astaamo badan kuwii ugu dambeeyay ee Xbox Series X si loo siiyo ciyaartooyda khibradda ugu wanaagsan ee suurtogalka ah. Tusaale ahaan, Kaydinta Tooska ah wuxuu ka dhigayaa cayaaraha inay si dhakhso ah uga rartaan NVMe SSDs. Dhanka kale, AutoHDR wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku darto hagaajinta HDR ciyaaraha ku saleysan DirectX 11 ama ka sareeya.
Si kastaba ha ahaatee, horumarinta ugu xiisaha badan waa hordhaca ah Xbox Game Pass, si loogu ciyaaro cinwaano cusub Xbox Studios iyo Bethesda. Taas micnaheedu waa helitaanka marin u helka in ka badan 100 ciyaarood oo kala duwan si aad u bilowdo.
Windows 10 vs Windows 11. Miyay horumar la taaban karo ku tahay nidaamka hawlgalka? Ma mudan tahay in laga boodo hal nooc ilaa mid kale? Jawaabtu waa haa, ilaa iyo inta kombiyuutarkeenu buuxiyo shuruudaha qalabka, waa fikrad fiican in la rakibo Windows 11.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa iyaduna habboon in la ogaado inay aad ugu dhowdahay in isbeddelkani dhalin karo dhibaato kale oo iswaafajin ah oo leh alaab hardware iyo software hore ah. Wax, dhanka kale, had iyo jeer dhici kara marka aad ka tagto nooc duug ah oo aad u gudubto mid cusub. Waa inaad sidoo kale aamintaa shaqada soosaarayaasha Microsoft, kuwaas oo maalintooda hagaajiyay inta badan khaladaadka jira bilowga Windows 10.
Sidaa darteed, waxa ugu caqliga badan in la sameeyo ka haajiro Windows 10 una gudub Windows 11, waa in la yara sugo. Ma badna, dhowr toddobaad, malaha bilo. Muddo macquul ah ka dib, inta badan dhibaatooyinka bilowga ah waxay u badan tahay in la xalin doono.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Nidaamyada hawlgalka » Windows 10 vs Windows 11: kala duwanaanshaha ugu weyn
Xagee laga soo dejinayaa qaab -dhismeedka PowerPoint ee bilaashka ah